उपनाम र थेगोले हिट भएका कलाकारहरु » Enavanari
नेपालमा हाँस्य कलाकारको लोकप्रियता दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ । टेलिश्रृंखलामार्फत जन्मिएका हाँस्य कलाकारको पछिल्लो समय ठूलो पर्दामा समेत प्रभाव बढ्दो छ । यसरी लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका कलाकार कोही उपनामका कारण चिनिएका छन त कोही थेगोसँगै हिट भएका छन। जितु नेपाल, सिताराम कट्टेल, कुञ्जना घिमिरे, केदार घिमिरे, विल्सन विक्रम राईलगायतका हाँस्य कलाकारलाई उपनामले बढी चिनिन्छ । उनीहरुले सिरियलमा बोल्ने थेगो हिट भएतापनि उपनामले नै उनीहरु दर्शकको मनमा बस्न सफल भएका छन ।
यस्तै, राता मकै, मुखमा हान्नु जस्तो, मुलाको साग, भोक लाग्यो, हैटलगायतका थेगोले केही कलाकारहरु चिनिएका छन् । उनीहरुले थेगोबाटै आफ्नो परिचय बनाएका छन् । पछिल्लो समय पनि टेलिसिरियलहरुमा हाँस्य कलाकारहरुले जबरजस्ती नयाँ थेगो त सिर्जना गरेका छन् तर थेगोकै कारण स्थापित हुन भने सकिरहेका छैनन ।
‘जिरे खुर्सानी’ भर्खर सुरुवात मात्र भएको थियो । यसको स्टोरी अनुसार म सुरुमा नेता थिएँ । त्यतिखेर दमन रुपाखेती भाई पनि थियो । म नेता भएको कारणले फिरफिरे कला केन्द्रको उद्घाटन गर्न जाँदा त्यो नेताले त्यहाँ आएका पत्रकार पनि देख्दैन । क्यामेरा पनि देख्दैन । नेता भैसकेपछि त यो सबैको ख्याल गर्छ नी । तर, त्यहाँ त्यो सबै नदेखेपछि मैले हैन ए विक्रम तैले कस्तो ठाउँमा ल्याइसहँ, मलाई न क्यामरा छ न पत्रकार छ, मुखाँ हान्नु जस्तो भनेर बोल्दिएको थिएँ । अनि त्यत्तिकै भयो याद भएन, त्यो कार्यक्रम अनइयर भयो पहिलो भाग ।
अनि मैले दोस्रो भागमा भने कतै पनि त्यो बोलेको थिइन । एकदिन त्रिपुरेश्वरमा हिँडिरहेको थिएँ । एक जना मान्छेले बोलाएर तपाईंहरुको नयाँ कार्यक्रम सुरु भएको रहेछ, ल बधाई छ । तर, तपाईंले पहिलो एपिसोडमा ‘मुखाँ हान्नुजस्तो’ भन्नुभएको थियो दोस्रो एपिसोडमा भन्नु भएन । त्यो भनेको राम्रो भएको थियो भन्नुभयो । अनि ए १ यो थेगो त राम्रो हुन्छ कि के हो ? भनेर तेस्रो एपिसोडबाट भन्न थालेको । ९, १० एपिसोड नपुग्दै त हिट भैहाल्यो ।
धेरैले किरण के।सी भन्नुभन्दा पनि ‘राता मकै’ भन्न सजिलो लाग्छ भन्नुहुन्छ । दर्शकहरु सबैले मन पराइदिनु भयो । त्यसकै प्रतिफल अहिले ‘राता मकै’ चोक बनेको छ । ‘राता मकै’ मार्ग बनेको छ । र, ‘राता मकै’ मासु पसल बनेको छ । ‘राता मकै’ पान पसल बन्यो । गाडीहरुमा पनि ‘राता मकै’ भनेर लेखिन थाल्यो । ‘राता मकै’ एल्बम बन्यो । यो सब देख्दा सुन्दा अहिले ज्यादै खुशी लाग्छ । मलाई भेट्दा धेरैले किरण के.(सी भन्दा पनि ‘राता मकै’ भनेर नै सम्बोधन गर्नुहुन्छ । त्यतिबेला जितु भाईले यो थेगो दिँदा यति धेरै भाइरल बन्छ भन्ने सोचेको थिईन ।
अनि गाउँबाट आईसकेपछि घर भित्र पस्दा मैले अब यति लामो बाटो हिँडेर आएको भन्ने हिसाबले ‘आफूलाई ह्याँ कस्तो भोक लाईराको छ’ भने । त्यो राम्रो भयो । अनि पछि मेरो ज्यान पातलो अग्लो भएका कारण पनि सबैले अब थेगोको रुपमा ‘भोक लाग्यो’ नै भन्दा पनि हुन्छ भन्ने सुझाव दिनुभयो र त्यो थेगो मैले बोल्दै गएँ । हुन पनि दुई तीन भागबाटै यो त हिट भयो । मलाई दर्शकले अहिले पनि यहि थेगोले चिन्नुहुन्छ ।
अहिले अब सुरेन्द्र के.सी भन्दा पनि मुला साग भनेर चिन्ने धेरै छन । बाटो हिँड्दा पनि मुलाको साग भन्नुहुन्छ खुशी लाग्छ । मेरो दुईवटा नाम भएछ भनेर । अरु सिरियलहरु मार्फत पनि सुरेन्द्र केसी भनेर त छाइसकेको थिएँ । तर ‘मुला साग’ भन्ने थेगोले मलाई सर्वत्र चिनाइदियोे ।
प्रस्तुति ःचक्र प्रसाद पोख्रेल